Wasiirka Arrimaha Gudaha oo Shir ka furay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Arrimaha Gudaha oo Shir ka furay Muqdisho
Tuuryare 8 April 2019 8 April 2019
Kulankaan waxaa diirada lagu saaray xaqiijinta Amniga deegaanadii ciidanka Xoogga dalka ay kala wareegeen Ururka Alshabaab, waxaana ka qeyb galay hey’adaha ka shaqeeya xasilinta iyo dowladaha taageera Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Gudaha, Fereraalka iyo Dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Maxamed Sabriye ayaa soo dhoweeyay howlgalada ciidan ee looga saarayo deegaanada Al-Shabaab ku sugan yihiin.
“Waxaan soo dhoweynayaa howlgalada ciidanka Xoogga dalka ay ka wadaan gobolka shabeelaha hoose, kaas oo la doonayo in dib loogu xoreeyo deegaanada ka maqan gacanta Dowlada” ayuu yiri Wasiir Sabriye.
Wasiirka ayaa sheegay inay si degdeg ah ugu shaqeynayaan xasilinta deegaanada la xoreeyay iyo in la gaarsiiyo adeegyada nolosha dadka muhiimka u ah.
Wasiirka ayaa sidoo kale la kulmay safiirada Mareykanka iyo Midowga Yurub ee Soomaaliya oo uu kala hadlay kordhinta taageerada mashaariicda xasilinta.
Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa ka socday Gobolka Shabeelaha hoose howlgalo Ciidanka Xoogga dalka deegaano muhiim ah kaga saareen Al Shabaab.
Ethiopia oo shir u qabaneysa Somalia iyo Somaliland
Madaxweynaha Puntland oo u ambabaxay Imaaraadka